Kedu ihe Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Banyere Na Na Na Na Na Na | Martech Zone
Ekwenyeghi m ma ị hụla vidiyo a. Ọ bụ enweghị nchebe maka ọrụ mana ọ bụ ihe na-atọ ọchị gbasara isiokwu nke akwụkwọ akụkọ ndị bụ isi na akwụkwọ akụkọ ọdịnala ọdịnala na-achọ ịbawanye ego site na ngosipụta nke mgbasa ozi ala, nke a makwaara dị ka ọdịnaya nkwado.
Mgbasa ozi ndi ala bụ usoro mgbasa ozi n'ịntanetị nke onye mgbasa ozi na-anwa iji nweta nlebara anya site na ịnye ọdịnaya ọdịnaya nke ahụmịhe onye ọrụ. Dị mgbasa ozi nke ndị obodo dakọtara n'ụdị na ọrụ nke ahụmịhe onye ọrụ ebe etinye ha.
Ewepụrụ m okwu abụọ John Oliver gosipụtara na mgbasa ozi ala.
Mgbasa Ozi Obodo aghụghọ, karịsịa mgbe ntụkwasị obi na òtù ndị a dị oke mkpa na ịdị adị ha.
Industrylọ ọrụ akụkọ ọdịnala na-ekwu okwu n'ime mgbasa ozi ala dị ka nke bara uru, atụkwasị obi usoro nke ị nweta ego… niile mgbe ị na-ewepụta akụkọ na-adịghị.
Enweghị m esemokwu ọ bụla na John Oliver na nke a. Havekwesịrị ịjụ onwe gị ihe kpatara ụfọdụ akwụkwọ ji enwe ihe ịga nke ọma ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọdịnala anaghị. Ọ bụghị n'ihi na ndị mmadụ agaghị akwụ ụgwọ maka akụkọ - m na-akwụ ụgwọ maka akụkọ site na ọtụtụ isi mmalite. Ọ bụ na ha wepụtara unyi ma na-atụ anya na a ga-akwụ ha ụgwọ maka ya.
Omenala Akụkọ Omenala Mgbasa Ozi
Na ikpeazụ m afọ na akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ, m na-kpam kpam-ada mbà n'obi banyere ala nke ozi ọma. Ọ bụ ezie na ngalaba na-ere ahịa data m nwere ọtụtụ nde ego na ngwa ọrụ ọ bụla mmadụ maara, onye ibe m - onye nyocha na ụlọ akụkọ na-eti desktọọpụ ochie ma ọ nweghị ngwaọrụ ọzọ na-abụghị Google iji rụọ ọrụ ya. Ọ wetara ụfọdụ ọrụ ebube wee rụọ ọrụ n'ime obi ya, mana apụrụ m ịkọ na ọdachi ala amalitela. Asusu ahụ bụ echiche mgbochi ụlọ ọrụ na isiokwu dị na akụkọ akụkọ sitere na anyaukwu nke ụlọ ọrụ ahụ. M na-echeta nke ọma mgbe anyị nwere akụkụ 40% uru ma na-egbubi akụkọ mmefu ego. Ug.
Nyochaa ndepụta mmekọrịta ọ bụla nke ụlọ ọrụ akụkọ ọ bụla taa ọ dị ka ha bụ nnukwu ụlọ ahịa ama ama. Ha na-etinye oge dị ukwuu na snippets ọnụ ala nke amụma ihu igwe, akara egwuregwu, na mpụ niile dara n'ime windo 30 ma ọ bụ 60 nkeji na enweghị omimi ọ bụla. N'ezie, nke a bụ ozi ị nwere ike inweta site na ọnụọgụ ọnụọgụ ọ bụla. O yikarịrị ka otu ndị na-ede akụkọ si enweta ya.
N'afọ a, enwere m obi ụtọ ịnọ na akụkọ mpaghara iji maa ọkwa nchịkọta ego mpaghara. Anọrọ m ihe dị ka sekọnd 20 na onye nta akụkọ ahụ n'elu ihe ndina ka anyị na mpaghara ahụ ga-ebi. Enweghị mkparịta ụka ndabere, enweghị nghọta, enweghị omimi na enweghị agụụ na akụkọ ahụ. A kpọbatara m n'ime ụlọ ọrụ ahụ, mee ebe ahụ, wee chịpụ m. Ọ bụghị na akụkọ m dị ịtụnanya, mana ụbọchị ole na ole igwu ala nwere ike mepụta akụkọ a na - apụghị ịgụta ọnụ nke gaara emetụ n'obi ndị mmadụ ma mee ka ị mata ọwa ahụ.
Site na-ewere ego maka nwa afọ mgbasa ozi, ndị a news outlets na-agwa anyị na ha enweghị ike ịtụkwasị obi… ha na-agwa anyị ha atụkwasịghịkwa onwe ha obi. Ike agwụla ha.
Ochicho ihe omuma a di elu
N'ezie, ihe nwute dị mwute bụ na ndị a bụ ndị a zụrụ azụ na ndị odeakụkọ nwere ọgụgụ isi na-enyocha ma dee karịa onye ọ bụla nọ na mbara ala. Ọchịchọ maka ọdịnaya na-arị elu mgbe akwụkwọ akụkọ na ụlọ ọrụ telivishọn na-ebelata mmefu ego ha.
Nsogbu a abụghị na akụkọ enweghị ike ire, ọ bụ na ụlọ ọrụ akụkọ anaghị enye ndị ahụ uru na ndị mmadụ na-atụ anya. Akụkọ ugbu a bụ mgbasa mgbasa ozi maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụ mgbochi azụmahịa na akụ na ụba mgbe anyị chọrọ ụlọ ọrụ karịa mgbe ọ bụla, ọ na-ewepụtakwa mmefu mgbe anyị kwesịrị iwepụ eriri anyị. Ndị na-eduzi ozi ọma abụghị naanị na-emebi ntụkwasị obi site na mgbasa ozi nke ala, ha ekpofu ntụkwasị obi ha na ọha na eze na ahịa akụkọ nta na-enweghị isi na nke edo edo.
Ihe kpatara m ji gụọ teknụzụ teknụzụ ma ọ bụ gee ntị na pọdkastị ụlọ ọrụ karịa mgbasa ozi ọdịnala bụ n'ihi na a na-emepụta ọdịnaya ahụ na ndị ọkachamara ghọtara ihe ahụ nke ọma, ọ bụ n'oge dị ka ha na-eme nchọpụta ahụ, ọ dịkwa oke na mgbe anaghị enyocha ya iji nweta eziokwu. M na-ele ozi ọma na-ekwu banyere teknụzụ na mgbe ụfọdụ m na-ezo ihu m na ihere na enweghị ihe ọmụma. Enwekwara ike iji mgbasa ozi mmekọrịta na-enyocha ozi sitere na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ma nweta echiche dị iche iche site na otu ndị ọkachamara maara nke ọma na m na-akpakọrịta. Nke a na-enyere m aka iji ozi niile m nwere ike ịchọta wee nwee nghọta m karịa echiche na-ezighi ezi nke onye nta akụkọ gbara ọsọ.
Akụkụ nke… cheta mgbe ụlọ ọrụ akụkọ na-achọ ibibi ndị na-ede blọgụ na ịde blọgụ? Ha kpọrọ ụlọ ọrụ ahụ asị ma ọbụkwa ọgụ iji wepụ nchebe ha n'okpuru nnwere onwe nke mgbasa akụkọ. Mgbe ha furu efu, akwụkwọ akụkọ tụgharịrị gaa na ịde blọgụ ma ugbu a ha na-abanye na mmepụta ọdịnaya maka azụmaahịa? Chei… ikwu maka otu asatọ na asatọ!
Ndị ọchụnta ego kwesịrị izere mgbasa ozi ụmụ amaala
Mmetụta kachasị njọ nke mgbasa ozi na-adịghị mma maka saịtị mgbasa ozi bụ ịtụkwasị obi. Na-enyocha ndị ọrụ webụsaịtị US nke ọma iji mata ma ha ga-atụkwasị obi na saịtị na-akwado isiokwu nkwado:
Nke a nwere ike ịbụ nsogbu maka azụmahịa. N'ime ọrụ niile anyị na ndị ahịa rụtụrụla n'ịntanetị, na-akwalite ịde blọgụ ụlọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta - ebe etiti ya niile bụ iji nweta ntụkwasị obi na ikike nke onye na-agụ ya. Enweghị ntụkwasị obi, enwere mmadụ ole na ole ga - eburu ekwentị ma chọọ ka gị na ha zụọ ahịa. Trusttụkwasị obi bụ ihe niile na nke a nwa afọ mgbasa ozi bụ nkọwa nke aghụghọ… na-agbakwunye ntakịrị ọkọlọtọ na ya nke na-ekwu na nkwado ọdịnaya anaghị agbanwe eziokwu na ọ nọ ebe ahụ iji duhie.
Anyị anaghị akwụ ụgwọ ọdịnaya na blog a. Anyị nwalere ya n'oge gara aga ma ọ dara nke ọma yana mebie aha anyị. Ugbu a, anyị nwere ndị na - akwado saịtị anyị na - akwalite mgbasa ozi siri ike maka na anyị na - akpọkwa ha site n’oge ruo n’oge na ọdịnaya anyị - mana jiri akọ na - emebi mmekọrịta ego anyị. Anyị anaghịkwa ekwe ndị nkwa n’ nkwa ọ bụla banyere ihe anyị ga-ede ma ọ bụ na anyị agaghị ede banyere ha.
Mgbe anyị nwetara onye ọbịa akwụkwọ na bọọdụ, iwu mbụ anyị bụ na ọ bụrụ na a na-akwụ ha ụgwọ n'ụzọ ọ bụla iji debe ọdịnaya ahụ, anyị ga-agbapụ ha, hichapụ post ahụ, ọbụnakwa nwee ike ịme iwu. Agwara ha ka ha ree na akwukwo ha, ha adighi n’ime ọdịnaya. Anyị chọrọ ka posts anyị bụrụ ihe mmụta - nke nwere ohere azụmaahịa ma ọ bụghị ịnwa ịchụpụ ya n'ụzọ aghụghọ. Hmmm… chetara gị ụbọchị ochie nke akụkọ ọdịnala?
Ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ enyemaka na ịmịpụta ọdịnaya dị ka infographic na ọcha, anyị ga-emepụta ya ma bipụta ya na ha saịtị, kwalite ya na ha network… ma mgbe ahụ anyị nwere ike igosipụta ya - na disclaimers - site na saịtị anyị. Ọbụna aha saịtị anyị ga-eme ka ndị mmadụ laghachi na saịtị ha. Anyị anaghị anwa ịsọ mpi maka anya anya, anyị na-achọ ịnye ndị na - agụ akwụkwọ anyị uru. Enweela ọtụtụ ọdịnaya i mepụtara maka ndị ahịa anyị na-ekebeghị ebe a.
Anyị abụghị ụlọ ọrụ akụkọ ọ bụla ma anyị ghọtara ibu ọrụ enyere anyị site na uto nke ndị na-ege anyị ntị na obodo ebe a. Mana mgbe ahụ anyị agaghị akwụ ụgwọ maka ma jikwaa ọrụ ọchịchị na ọtụtụ njikwa nke njikwa, ma. Ikekwe uru nke ozi ọma nke ụlọ ọrụ ndị a na-enye ka a gbanwee maka ọ bara uru ọhaneze. Ikekwe ha kwesiri ile anya iji kwado ndị ọrụ nchịkọta akụkọ ha ma lekwasị anya n'inye mma kama ịba ụba ego. Ego ha na-erite na ntụkwasị obi.
Mopub kesara otu ngwa ngwa ihe eji eme ihe na ebili n'ime netwok nke ha:
Foto: Izu Izu Ikpeazụ na John Oliver
Tags: Contentlyna-akpa ọchị videohbojohn oliverakukomopubnwa afọ mgbasa oziihe ndekọ oziakụkọndị nkwusankwado ọdịnayaọdịnala ọdịnalakedu ihe bu Mgbasaozi